फ्रान्सेली रानीका स्विडेली प्रेमी : रानीका चिठी सेन्सर गर्ने को ? :: NepalPlus
फ्रान्सेली रानीका स्विडेली प्रेमी : रानीका चिठी सेन्सर गर्ने को ?
नेपाल प्लस२०७८ असोज २२ गते १४:५४
फोटो- साईन्स डट ओआरजी
सन् १७९१ को अन्त्य र १७७२ को प्रारम्भ थियो। त्यो फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा रानी मारी आन्त्वानेतका विश्वासपात्र र एक स्वीडेनेलीसित प्रेम गरेकि थि ईन् । एक्सेल भोन फेर्सन नामका रानीका ति प्रेमीसँग एक गोप्य पत्राचारमा संलग्नताको खुलासा भएको छ ।
फ्रान्सेली राष्ट्रिय अभिलेखालयमा उनले गरेका आदान प्रदानका लगभग ५० चिठीहरु जीवित छन् । तर पन्ध्र चिठीहरुमा केहि अंशहरु पढ्न नसकिने गरीएको थियो । कालो मसी धसिएकाले प्रतिक्रियाहरु अस्पष्ट छन् । अन्वेषकहरूले एक्स-रे टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी यी परिवर्तनहरु मध्ये ४५ मुनिका शब्दहरु पढ्नयोग्य बनाएका छन् । उनीहरूले सेन्सरकर्ताको पहिचान गरेका छन् । त्यो गर्ने भोन फेर्सन आफैं थिए ।
“भोन फेर्सनले सम्पादन गर्नु, केरमेट गर्नुनै ईतिहासको एक प्रकाश हो” अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा फ्रेन्च साहित्यकी प्रोफेसर क्याट्रिओना सेठ भन्छिन् । उनी यो चिठी हेर्ने काममा संलग्न थिईनन् ।
इतिहासकारहरूले १९ औं शताब्दीको दोस्रो मध्यकालमा पत्रहरु सेन्सर गरिएको भन्ने सोचेका थिए । सम्भवतः भोन फेर्सनका भतिजाद्वारा लेखकहरुको प्रतिष्ठा बचाउन चिठी सेन्सर गरिएको थियो । अब विद्वानहरूले त्यो चिठी लेख्नुको कारण, त्यसको भाव र यसको पछाडिका कारणहरुलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको सेठले बताएकि छन् ।
स्विडेली नागरिक भोन फेर्सन र फ्रान्सेली रानी मारी आन्तोनेतले सन् १७७४ मा फ्रान्सको भेसाई दरबारमा भेटेपछि मित्रता शुरू गरेका थिए । र उनीहरुको निकट सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरुमा झन झ्यांगिएको अनुमान आजसम्म जारी छ । भोन फेर्सन रानीका एक राजनीतिक सहयोगी पनि थिए । फ्रान्समा राजतन्त्र बिरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला उनले जुन १७९१ मा फ्रान्सेली शाही परिवार देश छोडेर भाग्न लाग्दा सहयोग गरेका थिए । त्यस घटनालाई फ्रान्समा भारेनको उडान (फ्लाईट टु भारेन) भनेर चिनिन्छ ।
त्यो प्रयास असफल भएपछि रानी मारी आन्त्वानेत र उनका पति राजा लुई १६ औं कडा सुरक्षामा थिए । तर रानीले यहि अवस्थामापनि भोन फोर्सनका चिठी प्राप्त गर्ने र उनलाई सन् १७९१ को अन्त्य र सन् १७९२ को उत्तरार्धमा चिठी पठाउने र प्राप्त गर्ने ब्यवस्था मिलाईरहेकि थिईन् ।
ति गोप्य पत्रहरुको व्यक्तिगत प्रतिलिपि बनाईयो । र अक्टोबर १७९३ मा रानीको टाउको काटिए पछि उनको परिवारले ती मध्ये धेरै जोगाएर राखे । फ्रान्सेली राष्ट्रिय अभिलेखालयले १९८२ मा ति संग्रह किनेको थियो ।
तर अभिलेखालयले ति चिठी अधिग्रहण गर्नु भन्दा पहिले एक अज्ञात सेन्सरले भोन फेर्सन र मारी आन्तोनेटका १५ वटा पत्रहरुको अक्षरमाथि अन्य कुरा लेखिएको थियो । रानीले लेखेका अक्षरमाथि अन्य अक्षर खप्टिएर नबुझिने पारिएको थियो ।
सन् १९९० को दशकमा इतिहासकारहरूले तिनले लेखेको शब्द मुनिका अक्षरहरु पढ्ने प्रयास गरे । तर अक्षरमाथिनै दोहोरो रुपमा टाँस्सिएकाले पढ्न असम्भव बनायो । सन् २०१४ मा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा एक विशेषज्ञ आन मिशेलिनलाई ल्याएर फेरी कोसिस गरियो ।
मिशेलिनले फ्रान्सको प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयको संरक्षण अनुसन्धान केन्द्रमा एक वर्ष बिताईन्, ति चिठी पढ्न सकिने कुनै उपाय निकाल्ने प्रयासस्वरुप ।
उनले अन्तमा निर्धारण गरिन्- सबैभन्दा राम्रो एक्स-रे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्ने पद्दती प्रयोग गर्ने । यो लेखिएका अक्षरहरु विनाश नगरि पढ्न सकिने दृष्टिकोण हो जसले एक्स रे विकिरणको उपयोग गर्दछ । माथिल्लो भागको अक्षर वा मसिलाई छेडेर भित्र पढ्न, मूल अक्षर यथावत राख्न सेन्सरिंग मसी प्रयोग गर्ने ।
फोटो- सि आर सि
उनले सन् २०१८ सम्म उनलाई चाहिने उपकरण पाईनन् । त्यसपछि अर्को वर्ष लाग्यो, पत्रहरुको आठ वटा परिच्छेदहरुलाई पढन् सकिने बनाउन ।
शब्दहरुलाई उजागर गर्नको लागि मिशेलिन र उनका सहकर्मीहरुले पहिले एक्स-रेको प्रयोग गरी जिन्क, तामा, फलाम जस्ता तत्वलाई अलग पारे । त्यसो गरेपछि मूल पत्रको नक्शा अलग बन्यो । पत्रमा रानीले लेखेका मूल अक्षरहरुको मसी अलग पार्ने कोसिस गरियो । मूल अक्षरहरुका मसीको धातुहरु हटाएपछि मारी आन्त्वानेतले लेखेको पत्रका मूल अक्षर देखिए । शुरुमै उनीहरुले देखे, रानीले लेखेकि थिईन “तिमीबिना हुन्न ।”
४ जनवरी १७९२ मा रानी मारी आन्त्वानेत द्वारा लेखिएको एउटा पत्रमा मसी पोतिएको भाग (बायाँ) लाई एक्स-रे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपीको मद्दतले हटाइएको भाग (दायाँ) । तेस्रो, लतपतिएको मसी हटाउने एक्से यन्त्र । फोटो– सीआरसी
मसीको रासायनिक संरचनाहरु परिवर्तन गर्न सफल भए । मसीका चम्किला तत्व हटाउन खोज्दा भित्र पनि कागजातहरुमा परिवर्तन हुने देखियो । मिशेलिनका अनुसार कहिलेकाहीँ अन्वेषकहरूले एक लाईनबाट अर्को वा एक शब्दबाट अर्को पढ्न बिभिन्न डाटा विश्लेषण रणनीतिहरुको उपयोग गर्नुपर्‍यो । साईन्स एडभान्सेसमा रिपोर्ट गरिए अनुसार प्रयोगशालामा धेरै घण्टा गरिएको परिक्षणपछि उनीहरु आठ वटा चिठीका ४५ वटा पतिच्छेदहरु उजागर गर्न सफल भए ।
कमसेकम मसीले आश्चर्यजनक रुपमा अक्षरहरु खुलासा गरेका छन् । राष्ट्रिय अभिलेखालयले पहिलो पटक मिशेलिनको टोलीलाई सेन्सरको पहिचान पत्ता लगाउन भनेको बेला अनुसन्धानकर्ताहरुले बताउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर उनीहरुले आफ्नो सबै डाटाको विश्लेषण गरेपछि धेरै स्पष्ट भएको मिशेलिनले बताएकि छन् ।
भोन फेर्सनले आफ्नो प्रतिलिपि बनाउँदा उनले अन्ततः नयाँ मसीमा बदलिने गराए । उनले मसीलाई पछिल्ला अक्षरहरु प्रतिलिपि गर्न प्रयोग गरे जुन अघिल्लो पत्रहरुलाई सेन्सर गर्नको लागि प्रयोग गरीएको मसीसँग मिल्दोजुल्दो थियो । यो अर्को मसीनै थियो जुन पत्रहरुलाई सेन्सर गरेको थियो । “यसले मलाई धेरै आश्चर्यचकित बनायो,” मिशेलिन भन्छिन् ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार भोन फर्सनको उद्देश्य अस्पष्ट छ । तर अध्ययनका लेखकहरुको अनुमान छ, उनले रानीको सम्मानको रक्षा गर्न चिठीका केहि वाक्यांश मसीले पोतेर ढाकेको हुनसक्छ ।
पोतिएको मसी हटाएर हेर्दा पढ्न योग्य वाक्यहरु धेरै भावुक छन् । जस्तै “मेरो मुटु खुशी बनायौ,” र “तिमीलाई म माया गर्छु।” तर राजनीति र विश्व घटनाहरुमा गरिएका टिप्पणी बिना सेन्सर राखिएका छन् । सेठ भन्छिन्, “विद्वानहरुलाई पहिले नै जानकारि थियो कि मारी आन्त्वानेतको उनीप्रति धेरै गहिरो स्नेह थियो । तैपनि उनका पत्रहरुले रानीकोको विचार र भावनाहरुबारे प्रत्यक्ष अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ ।”